तपाईं एक DSLR मध्य मूल्य दायरा किन्न जाँदै र प्रयास गर्न प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा छिटो, सजिलो, वा को दृश्यदर्शी स्क्रीन को सबै भन्दा ठूलो उपकरण, प्रस्तावित नमूनाको उल्लेखनीय गुणस्तर कम से कम तपाईं परीक्षण र objectively मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। र क्यामेरा प्रतियोगिता भन्दा अलि राम्रो कुरा, एक सानो बुरा केहि, सबै पक्षहरूमा औसत छ, तर उपभोक्ता गुणहरू को राशि लागि यो बजार मा पहिले नै लगभग पूरा अनुरूप उपकरणहरू छ भने के गर्ने? यस मामला मा मूल्यांकन सधैं गर्दा अरूलाई विद्यमान वा कथित कमीकमजोरी को स्थानान्तरण सुरु, र अन्तमा सक्नुहुन्छ क्यामेरा राख्नु "unsatisfactory", subjectivity मुद्रण लगाएका गरिनेछ केही राम्रो क्यामेरा रूपमा चिनारी र पैसा सम्बन्ध को एक योग्य लगानी फेला परेन। को पुरानो D5000 प्रतिस्थापित जो Nikon d5100 क्यामेरा, - का ले nikon को बीचमा खण्ड मा सबै नवीनता सामना गर्न प्रयास गरौं।
6400 मा सोह्र मेगापिक्सेलको, आईएसओ मूल्य,3इन्च, गुणस्तर 1080 मा एक मोड भिडियो सुटिङ एक विकर्ण संग दृश्यदर्शी प्रदर्शन: क्यामेरा को मुख्य विशेषताहरु होनहार आवाज। डिजाइन पनि क्यामेरा गोलाकार र अलिकति रैखिक आयाम मा घट्यो हुनेछ, परिवर्तन भएको छ। नयाँ भिडियो Expeed2एसएलआर प्रयोग (पहिलो Expeed प्रयोग d5100)।
मा क्यामेरा Nikon d5100, यो बारेमा समीक्षा, खैर, पहिले नै नेटवर्कमा देखा छ, यो यसो गर्न सकिन्छ भनेर सबै क्यामेरा उपलब्ध छन् कि औसत अवैतनिक स्तर सुविधाहरू पूर्ण "सज्जन सेट"। मा ती7पूर्व निर्धारित ढाँचामा शूटिंग। यो एघार अंक, यो एकल-फ्रेम गर्न सम्भव छ केन्द्रित र ट्रयाकिङ केन्द्रित हुनेछ। जब लगातार शूटिंग Nikon d5100 प्रति सेकेन्ड4तस्बिरहरू सम्म बनाउन सक्षम। उहाँले दुई धूलो हटाउने प्रणाली, शरीर मा निर्मित फ्लैश छ त्यहाँ USB बंदरगाहों र HDMI, बाह्य माइक्रोफोन इनपुट, को दृश्यदर्शी मा सम्मिलित diopter छन्। फोटो र भिडियो शूटिंग गर्दा पैन र पालो संग प्रदर्शन सुविधा थप्छ।
र अझै, Nikon d5100 क्यामेराको बारेमा समीक्षा पढ्ने, तपाईं अक्सर यस क्यामेरा धेरै सुविधाजनक आफ्नो हात मा फिट छ कि राय पाउन सक्नुहुन्छ, यसको बटन धेरै ध्यान दिएर छन् र कुनै पनि एक हातले गाह्रो छैन प्राप्त। ब्याट्री एक सेट 565 ग्राम (लेन्स बिना), rubberized समाप्त शरीर र लामो जीवन - पनि धेरै एसएलआर को एक एकदम कम वजन याद गर्नुहोस्।
तर वर्तमान उपकरण मा कमीकमजोरी, Nikon d5100 ब्यालेन्स देखि मिसिन मा सेतो कहिलेकाहीं व्यवहार, यो सौम्य, को yellowness, को cyanosis मा एक तस्वीर लिइरहेको राख्न, अनौठो। खैर, यो दुर्लभ छ। म भन्ने बाहेक सबै भन्दा उल्लेखनीय समस्या हालसम्म कुनै अन्य प्रकट छैन खुसी छु।
मानक किरा लेन्स एक प्लास्टिक संग वायुसेना-एस 18-55 माउन्ट र ओप्टिकल stabilizer आश्चर्यजनक धेरै राम्रो छ। मानक लेन्स जसको लागि सबैभन्दा प्रतियोगिहरु, विपरीत - यो त एउटा सानो र छोटो चरण प्रयोगकर्ता चाँडै "भन्दा कदम" गर्न थप महंगा मोडेल खरीद प्रोत्साहन छ छ, निर्माता उपेक्षित 18-55 बाँकी छैन। म्याक्रो मोडमा, आफ्नो बच्चाहरु एक सभ्य स्तरमा तिखार्ने फोटो उत्कृष्ट छैनन् भने - यो निश्चित छैन "slop"।
र आफ्नो Nikon d5100 70-300mm लेन्स लागि खरिद मा stinted नगर्ने ती लागि एक सुखद आश्चर्य ध्यान गति र शूटिंग लागि अधिकतम दूरी मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुनेछ। निर्मित स्वतः ध्यान लेन्स ड्राइभिङ को गति र शुद्धता उदाहरणका लागि, यो कुनै पनि समस्या बिना कम उडान विमान तस्वीर गर्न सम्भव छ, असर गर्छ। स्थिरीकरण एक उच्च स्तर पनि छ, र त्यहाँ पर्याप्त छैन आकाश stabilizer दुई मोड सक्रिय र सामान्य, तारा हो, तर यो कहिलेकाहीं धेरै सजिलै देखिने गर्छ।
काम तपाईं स्वचालित, मार्गदर्शन ध्यान घन्टी अनुरूप छैन भने, तपाईं यसलाई ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि धेरै उच्च गुणवत्ता आवरण र एक मानक र Telephoto लेन्स उल्लेख गर्न चाहन्छु तिनीहरूले धेरै राम्रो तरिकाले राखिएको र सजिलै हटाइएका छन्।
Nikon L840 डिजिटल क्यामेरा: निर्दिष्टीकरणहरू, ग्राहक समीक्षाहरू र पेशेवरहरू
Valuy (च्याउ): एक नूनिलो र मसालेदार तयार
संगीतकार इन्टरनेटमा आफूलाई बढाउन रूपमा
रूस को प्रभावशाली विचित्रताहरू
Liqueur घरमा "Vana तेलिन": भाग। रक्सी "Vana तेलिन" पिउन कसरी र के सँग?
पतिको कसरी उतेजित गर्नु गर्न
विभिन्न विकल्प: लुगा संग रूपमा रंग हटाउन
बजार जोखिम: धारणा, फारामहरू, जोखिम व्यवस्थापन
10 सडक सबैभन्दा प्रतिभाशाली फोटोग्राफर को
समीक्षा: "Halidorum"। प्रयोगको लागि निर्देशन, contraindications, दबाइ "Halidorum"
प्लास्टिक Windows को लागि विन्डो छाप
अधिक इच्छित गढ गर्न उमालेर बनाउनु पतला?
एक अद्भुत सहायक - mitts हुक सम्बन्धित (को spokes)